သမ္မတဦးဝင်းမြင့်နဲ့ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ အမှုဖွင့်ခံရကြောင်း ဒီချုပ်ပြောတဲ့သတင်း၊ အာဏာသိမ်းမှုကို ရှုတ်ချကြောင်းနဲ့ အရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာချက် အဆုံးသတ်ဖို့ ဂျီ-၇ အဖွဲ့ တိုက်တွန်းတဲ့သတင်း၊ ဘဏ်နဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာ ကောလဟာလာတွေကို ဗဟိုဘဏ်ရှင်းလင်းပြီးနောက် ရွှေနဲ့ဒေါ်လာဈေးပြန်ကျတဲ့သတင်း၊ နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်မှုကောင်စီအဖွဲ့ဝင် ငါး ဦးကို တိုးချဲ့ခန့်အပ်၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး သုံးဦး ထပ်မံတာဝန်ပေးတဲ့သတင်း စတဲ့သတင်းတွေကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Author — Saw Nalaw
Author — khin aye
G7 အမြန်လုပ်ကြပါ စစ်တပ်ညစ်ပတ်လွန်းလိုး forces ကိုသုံးသင့်ရင်သုံးပါ
Author — เทพชัย โตศักดิ์
i can't use my facebook account today why?
Author — Da Da Eh
စစ်တပ်ထဲမှာလဲ တကွဲကွဲ တပြဲပြဲ ဖြစ်နေတယ်လို့ နီးစပ်သူတွေဆီက ကြားနေရပါတယ်။ မင်းအောင်လှိုင်ကို အဆိတ်ခတ်ခံရတယ်လို့ ကြားရရင်တောင် အံ့ဩမိမှာ မဟုတ်ပါလူး။ သူ့ကို မလိုလားတဲ့ သူတွေ စစ်တပ်ထဲမှာ မရေမတွက် နှိင်ပါဘူး။
Author — Han Soe Wei
လူယုတ်မာတွေ စစ်အစိုးရခေတ်မှာ ထဲကလုပ်လာတာ တောင်တရုပ်ပင်လယ်က အမေရိက သင်ဘောတွေ ဘာလုပ်နေလည်း
အမေစုနဲ့ဦးဝင်းမြင့်တို့က ကိုယ်ကျိုးအတွက်တရားမဝင်လုပ် ထားတဲ့ စီးပွား​ေရး​​​တို့ ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းကို ခိုးမှု မတရားသိမ်းယူမှုတို့ကို ရအောင်လိုက်ရှာလံရှာဖွေပြီး ဖော်ပြပါလား ကိုရဲကြီးရ😁😁😁
Author — V-partner Soe Paing
Good morning. Thanks 7Day TV News. You haveagreat day.👏👏
Author — Ma Nett
ြည်သူတွေကို ချစ်သေါ ရဲအရာရှိများနှင့် တပ်မတော်သါးများခင်ဗျား၊ စစ်လူမိုက် မင်းအောင်လှိုင်ကတော့၊ ငရဲအိုး ဂျိုးကပ်မှာ သေခြာနေပါပြီ။ နောင်ကြီးတို့ တါဝန်အရ၊ လုပ်ရတယ်ဆိုရင်လဲ၊ ပြည်သူတွေကို၊ ဂရုဏာနဲ့၊ ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး၊ ကြင်ကြင်နာနာနဲ့၊ ကိုယ့်ရဲ့မိဘတွေလို၊ သဘောထါးပြီး ဆက်ဆံပေးပါ။ သူခိုးကြီး လူမိုက် မင်းအောင်လှိုင် အတွက်နဲ့တော့၊ ငရဲကို မသွားခြင်ကြပါနဲ့။ အားလုံး စိတ်ချမ်းသါ ကိုယ်ကျမ်းမာ ရှိကြပါစေ။
Author — Myo Min Khaung
အပြစ်လုံးဝရှာမရအောင် အပြစ်ကင်း တဲ့ နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ကိုမတရားမရမကရှာကြံစွဲထားတဲ့ မတရားမှုကို လက်မခံ အသိအမှတ်မပြုပါ
Author — Golden_ jungkookie
အခုအချိန်မှာ hotel နဲ့ super market ဝန်ထမ်း တွေမှာတောင်ရှိတဲ့ ဆက်သွယ်ရေးကိရိယာ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် လို အိမ်မှာ ရှိတာ ထူးဆန်းလား?
အာ့ဆို လဲ ကိုင်ဗာင်သူ အားလုံးကို သွားဖမ်းလေ😡😡😡
Covid ကာလမှာ စည်ကမ်းဖျက် ပြီးဖွင့်တဲ့ နင်တို့ပထွေး KTV ဆိုင်ကဟာတွေကျတော့ တရားရုံးက ဆင့့်ခေါ်တာလဲမလာ၊နောက်တော့ ဒဏ်ကြေးလောက်နဲ့ပြီးဆုံးသွားတာ ဘာပြောမလဲ?